एसईईको नतिजा सार्वजनिक, १६ हजारले ल्याए ‘ए प्लस’ - देश विकास डटकम
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, १६ हजारले ल्याए ‘ए प्लस’
१२ असार २०७६, धादिङ्ग
यस वर्षको एसईई परीक्षामा १६ हजार ८२ ले ए प्लस ल्याएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार नतिजा प्रकशित गरेको हो। प्रकाशित नतिजाअनुसार ए प्लस ल्याउनेमा नौ हजार ५९६ छात्र र सात हजार २८६ छात्रा छन्।
यस्तै, ४ हजार ९६० ले ए जीपीए ल्याएका छन्। जसमा २७ हजार २७९ छात्र र २१ हजार ६८१ छात्रा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। यस्तै, ७४ हजार ११० ले बी जीपीए ल्याएका छन्। जसमा ३९ हजार ९५ छात्र र ३५ हजार ५० छात्रा छन्।
यस्तै, ६० हजार ७०६ जनाले बी प्लस जीपीए ल्याएका छन् । जसमा ३४ हजार १६६ छात्र र २६ हजार ५४० छात्रा छन्। ९७ हजार २९९ ले सी प्लस ल्याएका छन्। जसमा ४५ हजार ७८९ छात्र र ५१ हजार ५१० रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। सी जीपीए ल्याउने ९५ हजार २ सय ९ जना रहेका छन्। जसमा ४२ हजार ८८३ छात्र र ५३ हजार ३३६ छात्रा छन्। ४३ हजार ८४० जना विद्यार्थीले डी प्लस ल्याएका छन्। जसमा छात्रतर्फ १९ हजार १३३ र छात्रातर्फ ३४ हजार ७०७ रहेका छन्। चार हजार ४२९ जनाले डी जीपीए ल्याए । जसमा १८६६ छात्र र २५६३ छात्रा छन्।
गत चैतमा भएको परीक्षामा टेक्निलकलतर्फ चार लाख ५९ हजार २७५ ले परीक्षामा सहभागीता जनाएका थिए। परीक्षामा छात्रतर्फ दुई लाख ३० हजार १४१ र छात्रातर्फ दुई लाख २९ हजार १३४ ले भाग लिएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।
गत चैत १० गतेदेखि सञ्चालन गरिएको एसइई परीक्षाको नतिजा बिहीबार सावर्ज्निक भएको हो । परीक्षामा चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी सहभागी थिए । नतिजाका लागि नेपाल टेलिकमका ग्राहकले १६०० मा डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार जानकारी लिन सक्नेछन्।
टेलिकम तथा एनसेलको मोबाइल प्रयोगकर्ताले १६०० मा म्यासेज गरेर पनि नतिजा थाहा पाउन सक्ने छन् । सँगै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट http://see=gov=np मा पनि नतिजा हेर्न सकिनेछ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट http://www=neb=gov=np/results र नेपाल टेलिकमको वेबसाइट http://see=ntc=net=np/ मा समेत नतिजा हेर्न सकिने छ ।
← धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ महेश दोभान सडकमा लेदो जमेपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध
धुनिबेशी नगरपालिका वडा नं. ५ को अमलेचौरमा १ दिने स्वास्थ्य सञ्चार सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न । →
थाक्रे गाउपालिका ६ महादेबेशी मा सामुदायिक विधालयको शिक्षक दरबन्दी मिलन तथा बिधालय लाई शिक्षक सहयोग अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि कर्य्बिधी २०७६ को अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
२६ श्रावण २०७६, आईतवार १८:३० Saroj Poudel 0
देउवाको जिकिर- पौडेल पक्षले नै अन्तरघातीलाई कारबाहि गर्न दिएन
२ बैशाख २०७५, आईतवार २०:३४ Saroj Poudel 0
एमाले संसदीय दलको उपनेतामा नेम्वाङ
२१ चैत्र २०७४, बुधबार २०:३७ Saroj Poudel 0
धुनिबेशीका कृषकका लागि खुसीकाे खबर
धुनिबेशी नगरपालिकाका पशु वस्तुमा खाेरेत रोग पुष्टि, पशुविज्ञद्वारा अनुगमन
भुमेस्थान साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको १९ औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
जीवनपुर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको १९ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
श्री तसर्पु सानाकिसान कृषि सहकारीको साधारण सभा
केवलपुर महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको २२ औं स्थापना दिवस सम्पन्न
चण्डीदेवी आधारभुत विद्यालयका छात्रछात्राहरुका लागी न्यानो कपडा वितरण
सानिमा बैक, नौबिसे शाखाद्धारा २ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान
Copyright © 2022 देश विकास डटकम. All rights reserved.